Zimbabwe to interrupt cricket hiatus with sequence towards UAE – Daily Sports News
Home/Cricket/Zimbabwe to interrupt cricket hiatus with sequence towards UAE
Zimbabwe’s prolonged worldwide hiatus will come to an finish after they host United Arab Emirates in April, after which they’ll go to Netherlands and Eire in June and July.
Zimbabwe Cricket has struggled to fill the gaps in its calendar since failing to qualify for the World Cup, with a uncommon journey to India – initially scheduled for March within the Future Excursions Programme – falling by and Afghanistan pulling out of a tour scheduled for late April as a result of the video games wouldn’t be televised. The nationwide facet has had no engagements since November final 12 months, after they visited Bangladesh, with gamers spending the season participating in Zimbabwean home cricket or looking for alternatives in franchise T20 cricket abroad.
The hole between worldwide assignments can have stretched to 5 months earlier than Zimbabwe host UAE for 5 ODIs, with the matches scheduled for April 10, 12, 14 and 16, all at Harare Sports activities Membership. Earlier than the ODI sequence will get underway, UAE will first face Zimbabwe A in a 50-over warm-up match at Outdated Hararians Sports activities Membership on April eight, two days after their arrival within the nation.
Subsequent up for Zimbabwe on the worldwide enviornment might be an away tour to the Netherlands for 2 ODIs pencilled in for June 19 and 21, and two Twenty20 worldwide matches set for June 23 and 25.
From there, Zimbabwe will proceed to Eire the place they’ll play three ODI matches and three T20Is. The ODIs towards Eire are scheduled for July 1, four and seven, whereas the T20I matches are slated for July 10, 12 and 14.
Whereas the precise dates are but to be confirmed, the present ICC FTP means that Zimbabwe may host Afghanistan for a Check, 5 ODIs and three T20Is in August, after which West Indies for 5 ODIs and one Check in October.